ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် International IDEA မှ Mark MC. Dowell သည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ကနဦးကာလလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နေပြည်တော် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၀
ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် International IDEA မှ Mark MC. Dowell သည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ကနဦးကာလလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ၁၀-၉-၂၀၁၉ ရက် (အင်္ဂါနေ့) ၁၃၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (D-ဆောင်) ပထမထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ၌ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ကနဦးကာလလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ International IDEA မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်များဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်း၊ အတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်များ၊ International IDEA နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။